Musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha oo talooyin usoo jeediyey dowlada KMG Somalia
Iyadoo maalmihii u dambeeyay ay isa soo tarayeen qeyla dhaanta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ka muujinayeen habka maamulka awoodeed ee madaxda dalka ku leeyihiin xilliga kala guurka iyo shirarka Odayaasha dhaqanka ee lagu soo xulayo ergooyinka ansixineysa Dastuurka ayaa 7-ka mid ah musharaxiinta ay ka digeen in madaxda dowladda ay xilligan maamulaan dhaqaalaha dalka.
Musharaxiintan ayaa talooyin soo jeediyay, iyagoo beesha caalamka fariin u diray, waxaana madaxda dowladda ay ugu baaqeen inay is arkaan oo ay dood ka wada galaan habka looga gudbayo marxalada kala guurka ah.
Shir musharaxiinta ay maanta ku yeesheen Xarunta Xisbiga Nabada iyo Horumarka ee PDP ayaa waxay ka hadleen lagama maarmaanka in si deg deg ah lagu magacaabo Gudigiio qaban qaabin lahaa doorashada madaxtinimada, isla markaana si dhex dhexaad ah u qabta doorashada.
Xildhibaan C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda TFG-da laga joojiyo dhaqaalaha, isagoo xusay inay jiraan qaarkood oo doorashada ku jira, si aanay ololahooda ugu isticmaalin dhaqaalaha dalka.
“In si deg deg loo magacaabo gudi qaban qaabiya doorashada oo dhex dhexaad ah, in madaxda dowladda laga joojiyo maamulka dhaqaalaha, gaar ahaan kuwa doorashada, in gudiga doorashada ay noqdaan kuwo madax banaan”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Sidoo kale C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in in canshuuraha ka soo xarooda Dekeda iyo Air Por-ka in aan loo isticmaalin olole doorasho, waxaana uu ku baaqay in fursad loo siiyo xiriirka iyo galaan-galka loo leeyahay odayaasha dhaqanka sida uu yiri.
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo isna ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa sheegay inay soo baxday wixii ay ka baqayeen oo ahaa in waqtiga lagu dhameeyo wadadii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka.
“Maanta waxaa halkan u fadhinaa qatarta aan ka baqeynay inay timid ay dhow dahay, wadada la marayyay waqtiga lagu dhaafinayo, in afduub uu dhaco waliba si gooni ah ay wax u maamushaan, dadka saxiixayaa, oo an kuwo dan yar gooni wata, walaaceeni hore waa ka weyn yahay, halka xaal hada joogo”ayuu yiri Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar.
Gudoomiyaha Xisbiga Nabada iyo Horumarka Xasan Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxda dowladda ay dalka ka maqan yihiin, isla markaana todobaadyo is xiga aanay dalka joogin, iyadoo xaalad xasaasi ah uu dalka ku jiro.
“Madaxda dowladda dalka way ka maqan tahay, isbuux isku xigta dalka ma joogin, waqti dalka xasaasyo marayo, mida kale xafiisyo maamul ayay leeyihiin waa is aragnaa, aniga hada waxaa is aragnay Ra’iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka, madaxweynaha isma arkin, waxaa horay u kala hadalnay dhib badan inay jiraan”ayuu yiri Prof. Xasan Sheekh.
Prof. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin hadii ay musharaxiin yihiin inay madaxda dowladda si wada jir ah ula kulmaan, isla markaana dood la yeesheen, kadib markii uu xusay in wixii ay horay ugala hadleen aanay waxba ka bedelin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in qodobo ka mid ah Dastuurka uu yahay mid qaladaad ka buuxa, gaar ahaan qodobka 131aad ilaa 197aad, waxaana uu xusay in aan lagu cadeyn maqaamka uu leeyahay Caasimada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay
Walaaca musharaxiinta iyo dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa ahaa in lixda saxiixayaasha awooda xilligan ay ugu leeyihiin habka ka gudbista marxalada kala guurka ah, waxaana madaxda dowladda xilligan ay ku lug leeyihiin arrimaha socda, sida dastuurka iyo soo xulista odayaasha dhaqanka oo looga fadhiyo inay ergooyinka ansixinaya dastuurka ay soo xulaan, tiiyo dastuurka qudhiisa uu buuq badan ka jiro.